Kismaayo City - Jubbalandi Media
Author Archives: Kismaayo City
Home page: http://wwww.jubbalandi.com
Labo kamid ah dhagar qabayaasha shabaab Ee wakhtigooda dhamaaday, ayaa Naftooda ku waayay miino ay ku aasayeen meel u dhow Shandarmood oo ka tirsan Jubadda Hoose. Ciidanka Nabad suggida Jubaland oo ka war helay isla’markaana ku raadjoogay shabaabka dhuumaalaysiga kujooga Jubbooyinka ayaa baqdintii iyo cabsidii gashay awgeed kalsooni daro ay ka qaadeen ayay mar kaliya...
Gaas: Ma garanayno Qadar meel ay ku taalo
Madaxweynaha Puntland Abdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay go’aanka Dowlad Goboleedyadu ay kula safteen xulufada Sucuudiga, waxaana uu sheegay in Tariikh hore iyo iskaashi fac weyn uu ka dhexeeyo Soomaalida iyo Sucuudiga. Taa badalkeeda wuxuu sheegay in ayna ilaaqad lahayn Qadar xiita meel ay ku yaalan uuna Aqoonin. Dowlada federaalka ah go’aankeeda dhexdhexaadnimo...
Weerar is Qarxin ah oo ka dhacay Baydhabo
Weerar ismiidamain ah oo uu fuliyay nin isku soo xiray walxa qarxa ayaa galabta ka dhacay maqaayad ku taal magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa ay ku dhinteen tiro dad ah inkastoo aan lahayn inta ay yihiin waxaana jira dhaawacyo ka dhashay qaraxan. Maqaayada la qarxiyay ayaa ku taala agagaarka Afar Irdoodka Baydhabo halkaasoo ka mid ah goobaha...
Haweeney Xaamilo ah oo lagu dilay Magaalada Marko
Wararka ka imanaya Magaalada Marko ee Gobolka Shabeellah Hoose ayaa sheegaya in gudaha Magaaladaas laga helay maydka haweeney halkaas caan ka hayd. Haweeneydan ayaa la sheegay in ay kamid ahayd haweenka qudaarta ka ganacsada iyadoo ilaa hada aan la ogayn cida sida rasmiga ah dilkeeda ugu lug lahayd. Warar aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in kahor inta aan la dilin la kufsaday...
Maraykanka oo duqayn Cusub ka fuliyay Soomaaliya
Taliska Ciidamada Maraykanka qaybta ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in ay dileen sadex sargaal oo katirsan Al-Shabaab duqayn Cusub oo aan la sheegin halka ay ka dhacday. Anthony Falvo, oo ah afhayeen u hadlay taliska Mareykanka ee Africa ayaa u sheegay AP in goobta ay weerareen in rayid aysan ka dhaweyn, sidoo kalana ay baarayaan magacyada seddexda xubnood ee duqeynta...
Kiiska Qalbi Dhagax: Shan Arrimood oo aysan dowladdu sharrixin
Ugu dambayn dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war kasoo saartay dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax kadib todobaadyo ay ka aamusnayd. Shir aan caadi ahayn oo ay golaha wasiirada ka yeesheen Qalbi Dhagax ayaa markii dambe laga soo saaray war saxaafadeed, waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisoow. Golaha wasiirada...
Xildhibaanada Federaalka oo ka biyo diiday go’aanka lagu wareejiyay Qalbi Dhagax
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa kulan deg deg ah ka ka yeeshay go’aankii maanta ka soo baxay Xukuumada Soomaaliya ee ku aadanaa dhiibistii dowlada Itoobiya loo gacan geliyay C/Kariin Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa madaxda Jabhada ka dagaalanta dalka Itoobiya ee ONLF. Xildhibaan Maxamuud C/llaahi Axmed (Abuukaato) oo kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya...
Ciidamada Jubbaand oo qabtay qof Bam ku tuuray meel lagu caweeyo
Ciidamada amaanka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay qof bam gacmeed caawa fiidkii ku tuuray goob lagu caweeyo oo ku taala Magaalada Kismaayo. Qofkan ayaa la sheegay in bamku uu ku qarxay kahor inta uuna tuurin isla markana uu dhaawac kasoo gaaray qaraxii uu bamku uu sameeyay. Ciidamada amaanka oo durba goobta tagay ayaa gacanta kusoo dhigay qofkan oo la sheegay in uu ahaa...
Go’aan Golaha Wasiirrada Muqdisho, 06 September 2017 – Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan aan caadi aheyn oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga Qaranka iyo dhacdadii sarkaalka Jabhadda hubeysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu...
Xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Geelle kamid ah Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uusan waxba kala socon arinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Dowlada Federaalka ah ay ku wareejisay Itoobiya. “Anigu dalka waxaan kasii maqnaa 40 cisho marka uu warkan soo baxayay waxaana ka maqlay Saxaafada dad ka sheegaya in aan ku lug lahaa waana been abuur”...
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa saaka yeelanaya kulan aan caadi ahayn oo qabsoomaya maalin kadib markii uu baaqday kulankoodii caadiga ahaa. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kulanka saaka Xukuumadu ay kasoo saarayso war rasmi ah oo la xiriira arinta harqisay dowlada ee dhiibista Qalbi Dhagax. Inkasto ayna rasmi ahayn hadana waxaa jira warar sheegaya in Madaxweynaha iyo...
C/kariin Xuseen Guuleed oo u jawaabay Madaxweynaha DDSI
Madaxweynahii hore ee Maamulka Galmudug C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa ka jawaabay hadal xalay kasoo yeeray Madaxweynaha Ismaamullka Soomaalida Itoobiya oo ahaa in uu wax ka sixiixay heshiis ay Itoobiya iyo Soomaaliya ku gaareen in maxabiista labada dhinac la is dhaafsado. Heshiiskii Jigjiga Waxaa xusid mudan in dabayaaqadii bishii Abriil ee sanadkii 2016kii ay qalalaaso...
Raila Odinga oo sheegay in aan wali waxba laga qaban sidii ay u dhici lahayd Doorasho xalaal ah
Hogaamiyaha Xisbiga mucaaradka ee Kenya ee NASA Raila Odinga ayaa ku hanjabay inuusan ka qeyb geli doonin doorashada madaxtinnimada ee ku celiska ah ee bisha oktoobar dhici doonto isagoo ku xirey shuruud ka qeybgalka doorashada. Odinga ayaa sheegay inuu u baahan yahay dammaanad qaad dhinaca dastuurka ah mana uusan ka bixinin sharraxaad arrintaasi. Isbuucii la soo dhaafay...
Sheekh Shariif oo Muqdisho saldhiganaya
Madaxweynahii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta gaaray Magaalada Muqdisho iyadoo ay noqonayso markii labaad oo dalka uu kusoo noqdo tan iyo markii lagaga adkaaday doorashadii bilawgii sanadkan dalka ka dhacday. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in uu doonayo in uu saldhigto Magaalada Muqdisho isla markana uu abaabulo Xisbi Cusub oo uu kaga qayb galayo...
Madaxweynaha DDSI oo ka hadlay Arinta Qalbi Dhagax
Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo Waraysi gaar ah siiyay Telefishinka ESTV oo ku hadla afka Ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay arinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo Dowlada Federaalka ah ay ku wareejisay Itoobiya. “Qalbi Dhagax waa danbiile kufsi, dhac, iyo dilba ka gaystay deegaanka uu u dhashay dastuurka dalka ayaana...
Sheeko Xiisa leh Shimbir daroogo waday oo la toogtay
Booliska wadanka Argentine ayaa toogtay Shimbir loo adeegsanayay gudbinta daroogo, xabsi ku yaal magaalada Santa Rosa ee Gobolka La Pampa. Shimbirtan ayaa maro caloosha looga soo xiray loo adeegsanayay inay daroogo gudbiso, waxaana markiiba ka shakiyay Ciidamada ilaaliya Xabsiga lagu magacaabo Colonia. Saraakiisha Xabsiga ayaa sheegay in shimbirka ay dhowr maalin ay soo...
Xasan Cali Kheyre oo booqday Wasaarada Warfaafinta
Ra”iisul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay Xarunta Wasaarada Warfaafinta markii labaad tan iyo markii xilkan loo magacaabay. Ra”iisul Wasaaraha ayaa hada Xarunta Wasaarada kulan kula leh Agaasimayaasha waaxyaha Wasaarada isagoo kormeeray Xarunta Telefishinka Qaranka iyo Raadiyow Muqdisho. ...
Qarax ka dhacay Ceelasha Biyaha
Ciidamo katirsan Dowlada Federaalka ah oo marayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa lagu qarxiyay deegaanka Ceelasha biyaha. Qaraxan oo ka dhacay miino dhulka lagu aasay ayaa la sheegay in uu ku dhintay hal qof oo shacab ah oo wadada hareer marayay sidoo kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in qaar kamid ah Ciidamada Dowlada uu dhaawac kasoo gaaray. Intaas kadib...
Qayb ahaan hawada Soomaaliya oo la wareejinayo
Hey’adda ICAO oo maamusha Hawada Soomaaliya ayaa qorshaynaysa in hawada Soomaaliya ay ku wareejiso dalalka Hindiya iyo Seychelles. Dowlada federaalka ah iyo Hey’adda ICAO ayaa ku kala aragti duwanaday qaabka loo soo wareejinayo maamulka hawada Soomaaliya taas oo sababtay in Hey’adda ICAO ay qaybta raacsan badweynta Hindiya in ay ku wareejiso dalalka Hindiya...
SNA oo ka hadashay weerarkii Buulo Guduud
Taliyaha ciidamada Xoogga dalka ee qeybta 43-aad General Ismaaciil Saxardiid ayaa faah faahin ka bixiyay dagaalkii saaka ka dhacay Deegaanka Buulo Guduug ee Duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo. Taliyaha ayaa sheegay Alshabaab ay saaka waaberigii weerar ku soo qaadeen Xero ay ku sugan yihiin Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Jubbalaland oo ku taala deegaankaasi Buulo Guduud...